Sheori uye Hadhesi Chii? | Bhaibheri Rinodzidzisei?
MUMITAURO yaro yepakutanga, Bhaibheri rinoshandisa shoko rechiHebheru rokuti sheʼohlʹ uye rarakafanana naro rechiGiriki rokuti haiʹdes kanopfuura ka70. Mashoko acho ari maviri ane chokuita norufu. Dzimwe shanduro dzeBhaibheri dzinoashandura kuti “guva,” “hero,” kana kuti “gomba.” Zvisinei, mumitauro yakawanda hamuna mashoko anopa pfungwa chaiyo yemashoko aya, rechiHebheru uye rechiGiriki. Saka, Shanduro yeNyika Itsva inoshandisa shoko rokuti “Sheori” uye “Hadhesi.” Mashoko aya anomborevei chaizvo? Ngationei mashandisirwo aanoitwa mundima dzeBhaibheri dzakasiyana-siyana.
Muparidzi 9:10 inoti: “MuSheori, iyo nzvimbo yauri kuenda, hamuna basa kana kuronga mazano kana zivo kana uchenjeri.” Izvi zvinoreva here kuti Sheori inoreva guva chairo, kana kuti guva roga roga ratingave takaviga mudiwa wedu? Kwete. Bhaibheri parinotaura nezveguva chairo, rinoshandisa mamwe mashoko, rechiHebheru uye rechiGiriki, kwete sheʼohlʹ uye haiʹdes. (Genesisi 23:7-9; Mateu 28:1) Uyewo, Bhaibheri harishandisi shoko rokuti “Sheori” nokuda kweguva rinovigwa vanhu vanoverengeka pamwe chete, zvakadai seguva remhuri kana kuti guva rinovigwa vanhu vakawanda.—Genesisi 49:30, 31.
Saka, shoko rokuti “Sheori” rinoreva nzvimbo yakaita sei? Shoko raMwari rinoratidza kuti shoko rokuti “Sheori,” kana kuti “Hadhesi,” anoreva chinhu chinotopfuura guva guru rinovigwa vanhu vakawanda. Somuenzaniso, Isaya 5:14 inotaura kuti Sheori ‘yakakura uye yakashama muromo wayo kwazvo kupfuura miganhu.’ Kunyange zvazvo Sheori ichitaurwa sokunge yakatomedza vanhu vakafa vasingaverengeki, inogara ichiita seiri kungoda vamwe. (Zvirevo 30:15, 16) Kusiyana neguva chairo chero ripi zvaro, rinongopinda vanhu vakafa vashoma chete, ‘Sheori haiguti.’ (Zvirevo 27:20) Sheori haimbozari. Haina miganhu. Saka, Sheori, kana kuti Hadhesi, haisi nzvimbo chaiyo iri kune imwe nharaunda. Asi, iguva revanhu vose vakafa, nzvimbo yokufananidzira uko vakawanda vevanhu vanorara murufu.
Dzidziso yeBhaibheri yorumuko inotibatsira kunzwisisazve zvinoreva shoko rokuti “Sheori” uye rokuti “Hadhesi.” Shoko raMwari rinobatanidza Sheori uye Hadhesi norufu ruchazova norumuko. * (Jobho 14:13; Mabasa 2:31; Zvakazarurwa 20:13) Shoko raMwari rinoratidzawo kuti vaya vari muSheori, kana kuti Hadhesi, havangosanganisiri vaya chete vakashumira Jehovha asiwo vazhinji vasina kumushumira. (Genesisi 37:35; Pisarema 55:15) Saka, Bhaibheri rinodzidzisa kuti kuchava “nokumuka kwevakarurama nevasina kururama.”—Mabasa 24:15.
^ ndima 4 Kusiyana naizvozvo, vakafa vasingazomutswi vanorondedzerwa sevari “muGehena,” kwete muSheori, kana kuti Hadhesi. (Mateu 5:30; 10:28; 23:33) Kufanana neSheori uye Hadhesi, Gehena harisi nzvimbo chaiyoiyo.